कथा : त्यो अफिस – MySansar
Posted on September 16, 2017 September 16, 2017 by mysansar
‘गरिमा एक्लै छे, जाउ न त भाइ एकछिन बिजी बनाउ’ मैले भनेँ। धेरै कर गरेपछि सतिश लुखुर लुखुर गरिमाको टेबलतिर गयो। तर सतिशभन्दा पहिले नै सुनील गरिमाको डेस्कमा पुगेर बसिसकेकेा थियो। सतिशलाई असह्य भयो। अँध्यारो देख्यो चारैतिर। उ लर्खराउँदै क्यान्टिनको बाहिरपटि रहेको बाथरुम छिर्यो। धेरैबेरपछि मात्र बाथरुमको ढोका खोलेर सतिश निस्कियो।
अघिसम्म गरिमा पेल देखिएकी थिई, अहिले बाथरुमबाट निस्किँदा सतिश त्यस्तो देखिएको थियो। म नजिक आएर बस्ने बित्तिकै सोधेँ, ‘के भयो भाइ, स्खलित देखिन्छौ त?’ उसले मलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएन। अलिकति टाउको बङ्ग्याएर झ्यालको कालो सिसाबाट गरिमाको टेबलतिर चिहायो र सानो स्वरमा सुनीललाई लक्षित गर्दै भन्यो ‘मादर …….’।
प्रेम प्रस्ताव राखेको दुई तीन दिन सम्म अफिसमा गरिमा र सतिशको कुनै बोलचाल भएन। गरिमाले केही भन्छे कि भनेर सतिश पर्खाइमा थियो। टाढैबाट पटक पटक आँखा जुध्यो रे।
गरिमाको आँखा शान्त थियो रे। गरिमा खुशि पनि थिइन, दुःखी पनि थिइन रे। झण्डै एक हप्तापछि सतिश हिम्मत गरेर गरिमाको डेस्क छेउमा पुग्यो। एकछिन कुरेपछि गरिमाले ‘हेल्लो’ भनि। अनि केही बिर्सेर सम्झेजस्तो गरेर गरिमाले भनी, ‘अँ साँची तिम्रो एसएमएस पाएको थिएँ’
मध्य फागुन भइसक्दा पनि काठमाडौं तातिसकेको थिएन। सतिशको कोठाको खाटमा घोप्टो परेर पल्टिएकी गरिमाको टिसर्ट तन्किएर अलिकति देखिएको कम्मरमा झ्यालबाट छिरेको एक टुक्रा घाममा टल्किरहेको थियो। अधैर्य भएर कुर्सीमा बसेर टोलाइरहेको सतिश बेला बेलामा बाहिर होली खेल्नेहरुले कराएको आवाज सुनेर झस्किन्थ्यो। १५ मिनेट चकमन्न भएको कोठामा एकाएक गरिमाको सानो आवाज खस्यो। ‘सतिश, खाटमै बस न’।
नयाँ वर्षको इभमा सतिश र गरिमा अबेरसम्म ठमेलमा देखिएका थिए। गरिमाका पति झण्डै ६ महिनामा काठमाडौं आउँथे र गरिमासँग एक रात बिताएर फर्किन्थे।
गरिमालाई पत्रकारिता छोड्न र मधेशमै गएर घरबार सम्हाल्न उनकी बिधुवा सासु र पतिले पटक पटक दबाब दिएका थिए। यो आग्रहलाई नमान्दा गरिमा उनीहरुको लागि पराई हुँदै गएकी थिई। यता सतिशले पनि घरबाट बिहेका लागि आउन थालेको दबाबलाई अनेकौं बहाना बनाएर टार्न थालिसकेको थियो।
(September 25th, 2010 मा पहिलो पटक प्रकाशित)
3 thoughts on “कथा : त्यो अफिस”
A very realistic picture of our modern society in this story. However, story is not new. How the male psychology changes before and after marriage of the girl he wanted. Good work.
यो कथा कस्तो के नपुगेको के नपुगेको जस्तो लाग्यो…..
ब्रो ले ७ वर्ष पुरानो कथा छाप्दिनु भएछ । लाज लागेर आयो ।